विप्लव समूहले अन्तरिम संयुक्त सरकारका साथै राजा’वादीसँग पनि छलफल गर्ने…!
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्यु’निस्ट पार्टीका नेता–का’र्यकर्ता भूमि’गत अवस्थाबाट खुला रुपमा आ’उन थालेका छन् । खुला राजनी’तिमा फर्किएको चन्द समूह अब कसरी अघि बढ्छ ? पार्टीगत संरचना कस्ता: हुनेछन् रु नेता कार्यक’र्ता कुन रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् ?
सरकारसँग सहमति भएका’बाहेक नलेखि’एका सहमति के–के छन् भन्ने चासो र उत्सुकता आमरुपमा बढेको छ ।तीन बुँदे सह’मतिमा नपरेका–नलेखिएका तर सरकार र नेकपाबीच भद्र सम्झौ’ताबारे वार्ता टोलीका सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले केही स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिबन्धपछि लागेका कतिपय जघन्य किसिमका मु’द्दा फिर्ता र खारेजी’बारे सरकारसँग अर्को समझदारी आवश्य’क भएको उनले बताए ।
राजनीतिक एजेन्डा’लाई जनतामा लैजान सबै किसिमका विचार–सिद्धान्त राख्ने शक्तिसँग आफ्ना गन्तव्य र मागबारे पार्टीमा नि’र्णय गराएर छलफल चलाइने उनले खुला’सा गरे ।
अन्तरिम संयुक्त सरकार र सर्वपक्षीय सम्मेलन पनि आफ्नो एजेन्डा रहेको उनले सुनाए । अदालतको आदेश’बाट ब्यूँतिएको प्रतिनिधि’सभाले निकास नदिने र यो विघटनकै बाटोमा जाने निष्कर्ष आफ्नो पार्टीको रहेको उनले सुनाए । राजावा’दीदेखि संसद्मा भएका अरु राज’नीतिक शक्तिसँग पनि चन्द समूहले छलफलको तयारी थालेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
Prevबिनोद र अनिता खड्काको पहिलो गीत छोटो समयमा नै यति धेरैले हेरे (भिडियो सहित)
Nextपढ्न अमेरिका जानुअघि शृङ्खला र शिशनबीच झल्कियो प्रेम, अंगालो हालेर.. (भिडियो हेर्नु’स्)
मन परेकी केटि साथीको विवाह भएपछि डाक्टरद्वारा आ’त्मह-त्या प्रयास, १५ मिनेटमै प्रहरीले गर्यो उद्धार
अञ्जली अधिकारीको अभिनयमा नयाँ तिज गित (भिडियो सहित)
विवादपछि पहिलो पटक अर्जुन र उनकी श्रीमतीको भेट, भेटमा पर्यो चर्काचर्की (भिडियो सहित)
सडकको बीचमै एक्कासी यति ठूलो खाडल परेपछि..(भिडियो सहित)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (50970)